साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकाका ३ जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सार्वजनिक सवारीसाधन आवतजावतको प्रतिबन्ध कायमै राख्यो ।
सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणको लागि भन्दै लामो दूरीका यातायात गत चैतमा नै बन्द गराएको थियो । हाल धेरै संक्रमण देखिएका १४ वटा जिल्लामा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासनले पूर्ण वा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
निषेधाज्ञा जारी गरेका जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा जिल्लाभित्र छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन चलिरहेका छन् । छोटो दूरीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र धेरै सार्वजनिक सवारीसाधन चलिरहेका छन् ।
उपत्यकामा चल्ने अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनले सरकारले तोके अनुसार सामाजिक दूरी, अनिवार्य मास्क, स्यानिटाइजर लगायत सुरक्षा सावधानी अपनाएको देखिँदैन भने चालक, सहचालकले पनि मास्कको प्रयोग गरेको देखिँदैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताइरहेका छन् ।
कोरोनाको संक्रमण फैलिनबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड नअपनाएको भन्दै प्रहरीले सवारीसाधनलाई कारवाही गरिरहेको छ । उपत्यकामा मात्रै सुरक्षा सावधानी नगर्ने/नगराउने दैनिक १५–१६ सय सार्वजनिक सवारीसाधनलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्दै आएको प्रवक्ता ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वामदेव गौतमले बताए ।
‘दैनिक १५–१६ सयको हाराहारीमा सवारीसाधनलाई कारवाही गर्दै आएका छौं,’ प्रवक्ता गौतमले लोकान्तरसँग भने । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई खुला गरेपछि आजसम्म सुरक्षा सावधानी नअपनाउने ९ हजार १४८ वटा सवारीसाधनलाई कारवाही गरिएको एसपी गौतमले बताए ।
खोल्नुभन्दा बन्द गर सरकार : चालक
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सवारीसाधन चलाउनुभन्दा बन्द गर्नुपर्ने उपत्यकाभित्र बस चलाउँदै आएका चालकले बताएका छन् । रत्नपार्क–शहीदगेट–कालिमाटी–बसपार्क रुटमा सार्वजनिक बस चलाउँदै आएका धादिङका राजु तामाङले कोरोनाको त्रासमा सवारी चलाउनुभन्दा बन्द गर्नु बेस हुने बताए ।
‘यस्तो बेलामा चलाउनुभन्दा बन्द गरेको बेस हुन्छ । खोल्यो भने चलाउन मन लागिहाल्छ । अलिअलि भए पनि पैसा आउँछ कि भन्ने हुन्छ,’ चालक तामाङले लोकान्तरसँग भने, ‘दिनभर चलाउँदा गाडीमा भर्ने तेलको मात्रै पैसा उठ्ने गर्छ । कोरोनाको त्रासमा चलाउनुभन्दा सरकारले केही समयको लागि पूर्णरूपमा बन्द गरेको खण्डमा कोरोनाको संक्रमण फैलिँदैन ।’
विदेशमा काम गरेको पैसाले बस खरिद गरेर आफैं चलाउँदै आएका चालक तामाङका अनुसार बसमा चढ्ने कतिपय यात्रुले मास्क प्रयोग गर्दैनन् । मास्क विना गाडी चढ्न पाइँदैन भन्दा पनि ‘सरे मलाई सर्ने हो, तँलाई किन चासो’ भन्ने जवाफ दिने गरेको उनको अनुभव छ । सुरक्षामा बढी ध्यान दिनुपर्ने वृद्धवृद्धाले नै मास्क प्रयोग नगरेको चालक तामाङले बताए ।
मास्क नलगाउने झण्डै ४ लाख व्यक्तिलाई कारवाही
साउन ७ गतेदेखि सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई हटाएपछि अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने नियम बनायो । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने जस्ता नियम भने कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बतायो । मास्कलाई अनिवार्य नै बनायो । साउन २५ गतेसम्म मास्क नलगाउने झण्डै ४ लाख अर्थात् ३ लाख ९५ हजार व्यक्तिलाई कारवाही गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कारवाही गरिएको र कतिपयलाई सम्झाइबुझाइ गरेर छोडिएको जनाएको छ । हालसम्म अनुमति विना काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने करीब ७ हजार ६०० सवारीसाधन र करीब १९ हजार ४०० यात्रुलाई प्रवेश नाकाबाटै फिर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । करीब १ लाख ३७ हजार दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई होल्ड गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपत्यकामा मात्रै मास्क नलगाउने २० हजार २९९ जनालाई कारवाही गरिएको छ भने २ हजार १२७ जनालाई १०० रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सुशील यादवले बताए ।
सरकारले मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई कारवाही गरिरहे पनि उपत्यकामा औसत दैनिक ५०–६० जना कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन् । जनघनत्व धेरै भएको उपत्यकामा कोरोनाको संक्रमण धेरै फैलि नसक्ने भएकाले सरकारले संक्रमण रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
‘उपत्यकामा जनघनत्व पनि बढी छ । सरकारले यहाँ कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ,’ डा. पाण्डेले भने ।